ILake Dredging & Izinsiza Zokunakekela Amachibi - i-Ellicott Dredges
IChibi Ukudonsa nokulungisa
Imiklamo ye-Ellicott Dredges, ikhiqiza futhi ihambise ukuncela kwe-cutterhead futhi swinging ladder dredges ilungele izinhlobo ezahlukahlukene zamaphrojekthi wokwakhiwa kwechibi.
Ukudonswa kwechibi kuthatha isikhathi nokuhlela okufanele. Ngaphambi kokuqala iphrojekthi, kubalulekile ukuhlola zonke izinketho zokwehlisa ezikhona, izindleko, nezinhloso ezizotholwa ngokudonswa phansi. Uzofuna ukuqinisekisa ukuthi kukhona imali etholakalayo ukuhlela ngempumelelo nokwenza iphrojekthi kanye nokukhokhela noma yiziphi izindleko ezengeziwe ezingaba khona.
Amachibi amaningi ondliwa yimifudlana evela emifuleni noma emifuleni engaqukatha izinto ezingcoliswe ukungcola nezinhlobo eziningi zamaminerali. Lezi zinto zingaba yingozi empilweni yonke yechibi futhi zingathinta imisebenzi yokuzijabulisa efana nokudoba, ukubhukuda, nokuhamba ngesikebhe. Ngokuhamba kwesikhathi, izinto ezifana nodaka olumanyene nezakhi zomzimba zingalicindezela ichibi, zivumele izimila ezinkulu kanye nama-algae blooms ukuthi akhule.
Ukudonswa phansi kungasiza ekuvimbeleni ukukhula kwezimila noma ama-algae blooms - kwezinye izimo ngokudonswa phansi kungasiza ekubuyiseleni emuva inqubo ngokwenza ngcono izinga lamanzi lilonke. Ukudonswa phansi kungangeza ukujula echibini, kuvule isikhala sezinhlanzi futhi kuqede nezimo eziminyene zokuncishwa komoya-mpilo. Ukuba nezindawo ezijulile zamanzi kuzuzisa ikakhulukazi izinhlanzi ezihlala emachibini aqandayo ebusika. Izinto zokwakha, njengesihlabathi, ezibiwe echibini zingasetshenziswa futhi ukugcwalisa amabhishi noma amaphrojekthi wokubuyiselwa aseduze.
Izinhlelo Zokwakhiwa Kwedamu
Ngabe ungowenhlangano yabaninikhaya (HOAs) noma umasipala ocabanga ukutshala imali kuhlelo lokulondolozwa kwezimbiwa echibini? Izinhlelo zokudonswa kweLake zigcina impilo yonke, ukuphepha, ikhwalithi yamanzi nokuhamba echibini. Abanye abathatha izinqumo babheka izindleko zangaphambili zalezo zinhlelo njengezibiza kakhulu ukukhokha esikhundleni sokubona ukudiliza njengesixazululo sesikhathi eside esizuzisayo.
Ama-HOA amaningi ake ancika ekuxhasweni nguhulumeni wasekhaya asungule izinhlangano zawo ezingenzi nzuzo kanye nezifunda ezikhethekile zentela ukuze zizixhase ngemali ngamaphrojekthi okwakha amachibi esizayo. Omasipala abasekela izinhlelo zokudonswa kwamachibi nabo bangazuza emalini engenayo yentela yangakusasa ngenxa yezimo ezithuthukisiwe zamachibi ezibandakanya imisebenzi yokuzilibazisa efana nokudoba, ukubhukuda, nokuhamba ngesikebhe. Ichibi eligcinwe kahle lizoheha izivakashi ezizimisele ukuchitha isikhathi esithe xaxa echibini naseduze nokunikeza umfutho emnothweni wendawo.
Izindleko Engeziwe Zokwehlisa
Iphrojekthi yokwehlisa ichibi ingabiza. Kubalulekile kakhulu ukuthi uzilungiselele izindleko ezihambisanayo kufaka phakathi *:
Ucwaningo lokuthi kungenzeka yini
Imiklamo nezimvume zobunjiniyela
Izindleko zokusebenza kohlelo lokudonswa ngaphakathi kwendlu kuqhathaniswa nezindleko zomsebenzi owenziwa ngusonkontileka
Ukuhambisa nokulungisa imishini
Ukuhambisa nokulahla izinto ezibunjiwe
* Lolu hlu lwezindleko ezilindelekile akulona neze uhlu oluphelele lwazo zonke izindleko ezihambisana neprojekthi yokudiliza.
Imvume Yokwemba ILake
Imihlahlandlela yokuthola imvume yokudonswa kwechibi iyahlukahluka ngokuya ngokuthi iphrojekthi itholakala kuphi. Ngemininingwane engaphezulu, sincoma ukuthi uxhumane nedolobha lakho lasekhaya, County, noma uhulumeni wezwe ukuthola eminye imininingwane.